अध्याय ८१ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
यो पुरानो युग कति दुष्ट र अनैतिक छ! म तँलाई निल्‍नेछु! ए सियोन पर्वत! मलाई दण्डवत् गर्न खडा होओ! मेरो व्यवस्थापन योजनाको पूर्णताको लागि, मेरो महान् कार्यको सफलताको लागि, खडा भएर हर्षोल्‍लास गर्ने आँट कसले गर्दैन र! खडा भएर आनन्दले यता-उता उफ्रिरहने आँट कसले गर्दैन र? तिनीहरूले मेरो हातमा तिनीहरूको मृत्युलाई भेट्नेछन्! म अलिकति पनि कृपा वा दया नदेखाई प्रत्येकमाथि धार्मिकताको काम अघि बढाउनेछु, र म पूर्ण रूपमा अपक्षपाती भएर त्यसो गर्नेछु। सबै मानिसहरू हो! मलाई प्रशंसा दिन, र मलाई महिमा दिन खडा होओ! अनन्‍तदेखि अनन्‍तसम्‍मका सबै असीम महिमा मेरै कारणले अस्तित्वमा छन्, र तिनलाई मैले स्थापित गरेको थिएँ। कसले आफ्‍नै निम्ति महिमा लिने आँट गर्छ? कसले मेरो महिमालाई भौतिक कुराको रूपमा लिने आँट गर्छ? तिनीहरूलाई मेरो हातले मार्नेछ! ए, निर्दयी मानव हो! मैले तिमीहरूलाई सृष्टि गरेँ र तिमीहरूको लागि भरणपोषण गरेँ, अनि मैले तिमीहरूलाई आजको दिनसम्‍म ल्याएको छु, तैपनि तिमीहरूलाई मेरो बारेमा अलिकति पनि थाहा छैन, र तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्दै गर्दैनौ। म कसरी तिमीहरूलाई फेरि कृपा देखाउन सक्छु? म तिमीहरूलाई कसरी मुक्ति दिन सक्छु? म त तिमीहरूलाई मेरो क्रोधद्वारा मात्रै व्यवहार गर्न सक्छु! म तिमीहरूसँग विनाश, र अनन्त सजायद्वारा बदला लिनेछु। धार्मिकता यही हो; यो यस्तो मात्रै हुनसक्छ।
मेरो राज्य ठोस र स्थिर छ; यो कहिल्यै पनि ढल्‍नेछैन। यो अनन्तसम्‍म रहिरहनेछ! मेरा पुत्रहरू, मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू, र मेरा मानिसहरूले मसँग सदासर्वदा आशिषहरूको आनन्द लिनेछन्! आत्मिक कुराहरूलाई नबुझ्‍नेहरू र पवित्र आत्माका प्रकाशहरू नदिइएकाहरूलाई ढिलो-चाँडो मेरो राज्यबाट हटाइनेछ। तिनीहरूले आफ्‍नो चाललाई छोड्नेछैनन्, तर मेरो फलामको लौरोको शासन र मेरो प्रतापले तिनीहरूलाई जबरजस्ती निकाल्‍नेछन्; यसको साथै, तिनीहरूलाई मेरो खुट्टाले लात हानेर निकालिनेछ। केही समयसम्‍म (अर्थात्, जन्‍मदेखि नै) दुष्ट आत्‍मा लागेकाहरू सबैलाई अब खुलासा गरिनेछ। म तँलाई निकाल्‍नेछु! मैले भनेको कुरा के तिमीहरूलाई अझै याद छ? म—पवित्र र निष्खोट परमेश्‍वर—घिनलाग्‍दो र फोहोरी मन्दिरमा बास गर्दिन। दुष्ट आत्‍मा लागेका मानिसहरूलाई यो कुरा थाहा छ, र मैले स्पष्ट पार्नु पर्दैन। मैले तँलाई पूर्वनियुक्ति गरेको छैन! तँ पुरानो शैतान होस्, तैपनि तँ मेरो राज्यमा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छस्! अवश्य हुँदैन! म तँलाई भन्दैछु! आज म तँलाई यो कुरा अत्यन्तै स्पष्ट पार्नेछु: मानवजातिको सृष्टिको बेला मैले चुनेकाहरूमा मैले मेरो गुण र मेरो स्वभाव हालिदिएको छु; त्यसकारण, तिनीहरू मप्रति मात्रै बफादार छन्, तिनीहरूले मण्डलीको लागि बोझ उठाउन सक्छन्, र तिनीहरू आफूलाई मेरो निम्ति अर्पण गर्न र तिनीहरूको सम्पूर्ण अस्तित्व मलाई समर्पित गर्न तयार छन्। त्यसकारण, मैले छनौट नगरेकाहरूलाई शैतानले निश्‍चित हदसम्‍म भ्रष्ट तुल्याएको छ, र तिनीहरूसँग मेरो कुनै पनि गुण र मेरो कुनै पनि स्वभाव छैन। तिमीहरूलाई लाग्छ कि मेरा वचनहरू विरोधाभासपूर्ण छन्, तर “तिमीहरूलाई मैले पूर्वनियुक्ति गरेको र छनौट गरेको हुँ, तैपनि तिमीहरूले तिमीहरूका कार्यहरूको परिणामहरू भोग्‍नुपर्छ” भन्‍ने वचनहरू सबैले शैतानलाई जनाउँछ। अब म एउटा कुरा व्याख्या गर्छु: आज, खडा भएर मण्डलीहरूमाथि अख्तियार लिन सक्‍ने, मण्डलीहरूको गोठाला गर्ने, मेरो बोझलाई बुझ्‍ने, र विशेष कार्यहरू पूरा गर्नेहरू—यिनीहरूमध्ये एक जना पनि ख्रीष्‍टको सेवामा हुँदैनन्; तिनीहरू सबै मैले पूर्वनियुक्ति गरेका र चुनेकाहरू हुन्। तिमीहरूले धेरै चिन्ता गरेर आफ्‍नो जीवनको प्रगतिलाई ढिलाइ नगर भनेर मैले तिमीहरूलाई यो कुरा बताएको हुँ। कति जनाले ज्येष्ठ पुत्रको हैसियत जित्‍न सक्छन्? के यो डिप्लोमा प्राप्त गर्नु जत्तिकै सजिलो हुनसक्छ? असम्‍भव कुरा! यदि मैले तिमीहरूलाई सिद्ध नतुल्याएको भए, तिमीहरूलाई शैतानले धेरै पहिले नै निश्‍चित हदसम्‍म भ्रष्ट तुल्याइसकेको हुनेथियो। यही कारणले गर्दा मैले बारम्बार के कुरालाई जोड दिएको छु भने मप्रति निष्ठावान हुनेहरूलाई मैले सधैँ हेरचाह र रक्षा गर्नेछु र तिनीहरूलाई हानी र कष्टबाट जोगाउनेछु। मैले पूर्वनियुक्ति नगरेकाहरू दुष्ट आत्‍मा लागेकाहरू हुन्; तिनीहरू अचेत, सुस्त, र आत्मिक रूपमा कमजोर भएकाहरू हुन्, र जसले मण्डलीहरूको गोठाला गर्न सक्दैनन् (अर्थात्, जोश भएका तर दर्शनहरूको बारेमा स्पष्ट नभएकाहरू)। तिमीहरूलाई तुरुन्तै मेरो नजरबाट हटाइनुपर्छ, र जति चाँडो गर्‍यो उति राम्रो हुन्छ, नत्र तँलाई देखेर मलाई घिन लाग्‍नेछ र रिस उठ्नेछ। यदि तँ चाँडै गइस् भने, तैँले थोरै सजाय पाउनेछस्—तर तँलाई जति धेरै समय लाग्छ, सजाय त्यति नै कठोर बन्‍नेछ। के तैँले यो कुरा बुझिस्? यति लाजमर्दो तवरले काम गर्न छोड्! तँ पथभ्रष्ट र अनियन्त्रित छस्, सोच्नै नसकिने र लापरवाही छस्, र तँ कस्तो प्रकारको फोहोर होस् भन्‍ने तँलाई थाहा छैन! तँ अन्धो होस्!
मेरो राज्यमा सत्ता लिनेहरूलाई मैले होशियारीको साथ चुनेको छु र तिनीहरू बारम्बार परीक्षाहरूबाट भएर गएका छन्; तिनीहरूलाई कसैले पनि जित्‍न सक्दैन। मैले तिनीहरूलाई सामर्थ्य दिएको छु, त्यसकारण तिनीहरू कहिल्यै पनि पतन हुने वा पथभ्रष्ट हुनेछैनन्। तिनीहरूले मेरो स्वीकृती प्राप्त गरेका छन्। आजदेखि उसो, कपटीहरूले तिनीहरूको साँचो रङ्ग देखाउनेछन्। तिनीहरूले सबै किसिमका लाजमर्दो कुराहरू गर्न सक्छन्, तर अन्तिममा, तिनीहरू मेरो हातबाट उम्कनेछैनन्, जुन हातले शैतानलाई सजाय दिन्छ र भस्‍म गर्छ। मेरो मन्दिर पवित्र र निष्खोट हुनुपर्छ। यी सबै मेरो गवाही, मेरो प्रकटीकरण, र मेरो नामको लागि महिमा हो। मेरो मन्दिर मेरो अनन्त वासस्थान र मेरो अनन्त प्रेमको पात्र हो; म प्रायजसो यसलाई प्रेमको हातले प्यार गर्छु, यसलाई प्रेमको भाषाले सान्त्वना दिन्छु, मेरो प्रेमको आँखाले यसको वास्ता गर्छु, अनि यसलाई प्रेमको काखमा अङ्गाल्छु, ताकि यो दुष्टहरूको पासोमा नपरोस् वा शैतानको छलमा नपरोस्। आज, मेरो लागि सेवा गर्ने तर मुक्ति नपाएकाहरूलाई म अन्तिम पटक प्रयोग गर्नेछु। म किन यी कुराहरूलाई मेरो राज्यबाट बाहिर फ्याँक्‍नको लागि हतार गर्छु? मैले तिनीहरूलाई मेरो नजरबाट खेदाउनैपर्छ? म तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा घृणा गर्छु! मैले किन तिनीहरूलाई मुक्ति दिएको छैन? म किन तिनीहरूलाई तिरस्कार गर्छु? मैले किन तिनीहरूलाई प्रहार गरेर मार्नैपर्छ? मैले किन तिनीहरूलाई नष्ट गर्नैपर्छ? (तिनीहरूको खरानी लगायत तिनीहरूको एक टुक्रा पनि मेरो नजरमा रहन सक्दैन।) किन? ठूलो रातो अजिङ्गर, प्राचीन सर्प, र पुरानो शैतानले समेत मेरो राज्यमा सित्तैमा भरण-पोषण खोज्छ! उप्रान्त सपना नदेख्! ती सबै बेकार हुनेछन् र खरानीमा परिवर्तन हुनेछन्!
म यो युगलाई नष्ट गर्नेछु, यसलाई मेरो राज्यमा रूपान्तरण गर्नेछु, र मैले प्रेम गर्ने मानिसहरूसँग अनन्तसम्‍म जिउने र आनन्द गर्नेछु। ती अशुद्ध कुराहरूले तिनीहरू मेरो राज्यमा रहन सक्छन् भनेर कल्‍पना गर्नु हुँदैन। के तिमीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्न सक्छौ भन्‍ने तिमीहरूलाई लाग्छ? त्यस्ता सपनाहरूलाई बिर्सिदेओ! मेरा नजरहरूले सबै कुरालाई देख्छन् भन्‍ने तिमीहरूलाई थाहा छैन! सबै कुरा मेरै हातले मिलाउँछन् भन्‍ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन! तिमीहरू उच्‍च रूपमा सम्मानित छौ भन्‍ने विचार नगर! तिमीहरूमध्ये हरेकले तिमीहरूको आफ्‍नै उचित स्थान लिनुपर्छ। नम्र बनेको बहाना नबनाओ (मैले आशिषित हुनेहरूलाई उल्‍लेख गरिरहेको छु) वा काँप्‍ने र डराउने नगर (मैले दुर्भाग्य भोग्नेहरूलाई उल्‍लेख गरिरहेको छु)। अहिले नै, मानिसहरू सबैले आफ्‍नो हृदयको कुरा जान्‍नुपर्छ। मैले तिमीहरूलाई नामले नबोलाए तापनि, तिमीहरूले अझै सुनिश्‍चितताको अनुभूति गर्नुपर्छ, किनभने मैले मेरा वचनहरू प्रत्येक व्यक्तिप्रति लक्षित गरेको छु। तिमीहरू मेरा चुनिएकाहरू भए पनि नभए पनि, मेरा वचनहरू तिमीहरू सबैको हालका स्थितिहरूप्रति लक्षित छन्। भन्‍नुको अर्थ, यदि तिमीहरू मेरा चुनिएकाहरूमध्येका हौ भने, तिमीहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरेका छौ त्यसअनुसार मैले चुनेकाहरूको स्थितिको बारेमा म बोल्छु; जो मेरा चुनिएकाहरू होइनन्, तिनीहरूका हकमा भन्दा म तिनीहरूको स्थितिहरूअनुसार पनि बोल्छु। त्यसकारण, मेरा वचनहरू निश्‍चित विन्दुसम्‍म बोलिएका छन्; तिमीहरू प्रत्येकले त्यस कुरालाई राम्ररी बोध गरेको हुनुपर्छ। आफैलाई धोका नदेओ! नडराओ! किनभने मानिसहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै थोरैमा सीमित भएको हुनाले, छलले काम गर्नेछैन! मैले जसलाई चुनिएको हो भनी भन्छु ऊ चुनिएको हो, र बहाना गर्ने कार्यमा तँ जति नै सिपालु भए पनि, मेरो गुणविना तँ असफल हुनेछस्। मैले मेरो वचन पूरा गर्ने हुनाले, म लापरवाही रूपमा आफ्‍नो योजनालाई वाधा दिँदिन; म जे गर्न चाहन्छु त्यही गर्छु, किनभने मैले गर्ने सबै कुरा सही छ। म सर्वोच्‍च हुँ, र म अद्वितीय छु। के यसको बारेमा तिमीहरू स्पष्ट भयौ? के तिमीहरूले यो कुरा बुझ्यौ?
अब मेरा वचनहरू पढिसकेपछि, दुष्ट र कुटिल अनि छलीहरूले पनि प्रगतिको खोजी गर्न र तिनीहरूका आफ्‍नै व्यक्तिगत प्रयासहरू लगाउनको लागि कठिन प्रयास गरिरहेका छन्। आफूलाई मेरो राज्यमा प्रवेश गराउनको लागि तिनीहरूले थोरै मात्रै मूल्य चुकाउन चाहन्छन्। तिनीहरूले त्यस्ता विचारहरूलाई पन्छ्याउनुपर्छ! (यस्ता मानिसहरूसँग कुनै आशा छैन किनभने मैले तिनीहरूलाई पश्‍चात्ताप गर्ने मौका दिएको छैन।) म मेरो राज्यको प्रवेशद्वारलाई रक्षा गर्छु। के मानिसहरू आफूले जसरी चाह्यो त्यसरी मेरो राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छन् भन्‍ने तँलाई लाग्छ? के मेरो राज्यले जस्तोसुकै फोहोरलाई स्वीकार गर्नेछ भन्‍ने तँलाई लाग्छ? के मेरो राज्यले जस्तोसुकै व्यर्थ कुरालाई स्वीकार गर्नेछ? तँ भूलमा परेको छस्! आज, राज्यमा हुनेहरू मसँगै राजकीय शक्ति भएकाहरू हुन्; मैले तिनीहरूलाई होसियारीको साथ पालनपोषण गरेको छु। यो चाहेर मात्रै पनि हासिल गर्न सकिने कुरा होइन; तिमीहरूले मेरो स्वीकृती प्राप्त गर्नैपर्छ। यसको साथै, यो कसैसँग छलफल गर्ने कुरा होइन; यो मैले आफैले मिलाउने कुरा हो। मैले जे भन्छु त्यही हुन्छ। मैले प्रेम गर्नेहरूलाई मेरा रहस्यहरू प्रकट गरिन्छन्। दुष्ट काम गर्नेहरू—अर्थात्, मैले नचुनेकाहरू—ती प्राप्त गर्ने हकदारहरू होइनन्। तिनीहरूले यी रहस्यहरूलाई सुने पनि, तिनीहरूले तिनलाई बुझ्‍नेथिएनन्, किनभने शैतानले तिनीहरूको आँखा ढाकिदिएको छ र तिनीहरूको हृदयलाई पकडमा लिएको छ, यसरी तिनीहरूको सम्पूर्ण अस्तित्वलाई बरबाद गरेको छ। मेरा कार्यहरू अचम्‍मका र बुद्धिमानी छन्, र म सबै कुरालाई मेरो सेवाको निम्ति परिचालन गर्छु भनेर किन भनिन्छ? मैले पूर्वनियुक्ति नगरेका र नचुनेका मानिसहरूलाई म दण्ड दिन र भ्रष्ट तुल्याउनका निम्ति शैतानको हातमा सुम्पिनेछु, र तिनीहरूलाई दण्ड दिने कार्यमा म कसैको हस्तक्षेप लिनेछैन; म यति बुद्धिमानी छु! यसको बारेमा कसले विचार गरेको छ? कुनै पनि प्रयासैविना, मेरो महान् कार्य पूरा भएको छ, होइन र?
अघिल्लो: अध्याय ८०
अर्को: अध्याय ८२
पत्रुसले येशूसँग बिताएको समयमा उनले येशूमा धेरै असल गुणहरू देखे, धेरै पक्षहरू अनुकरण गर्न लायकका थिए, र धेरै पक्षहरू जुनले उनलाई समर्थन...
धेरैजसो मानिसहरूले के विश्‍वास गर्छन् भने, बाइबल बुझ्नु र यसको व्याख्या गर्न सक्षम हुनु भनेको सही मार्ग पत्ता लगाउनुसरह हो—तर वास्तवमा,...
मानिससँग विश्‍वासको अनिश्‍चित शब्द मात्र हुन्छ, तैपनि केले विश्‍वासको निर्माण हुन्छ भन्ने मानिसले जान्दैन, उसमा विश्‍वास हुन्छ भन्ने कुरा त...